Budata Office 2013 maka Windows
Budata Office 2013
Free Budata maka Windows (0.48 MB)
Budata Office 2013,
Microsoft ekwuputala Microsoft Office 2013, ụdị nke 15 nke Microsoft Office, nke a na-atụ anya na ọ ga-eji Window 8 bịa. Ọ nọ na-eche otú Office 2013 ga-esi na ọgbọ ọhụrụ mepụtara. Karịsịa, eziokwu ahụ bụ na Windows 8 ga-erite uru site na interface Metro na-eme ka Office 2013 bụrụ ọpụrụiche.
Budata Microsoft Office 2013
Mmemme ọfịs Microsoft ọhụụ Office 2013 na-eweta ọtụtụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ. Office 2013, nke edoziri site na iji ngọzi niile nke Windows 8 Metro interface, na-apụta na ihu dị mfe ma bara uru karị. Karịsịa ekele ya interface ọhụrụ, ọtụtụ ndị ọrụ ga-enwe ike iji sọftụwia Office dị mfe.
Microsoft na-achọ mfe dị ka isiokwu na nso nso a, Microsoft na-enye anyị otu echiche ahụ na Office 2013. Nezie, naanị ihe gbanwere abụghị ọdịdị ya, mana ọtụtụ ọhụụ ọhụrụ siri ike nke ọhụụ na-eweta bụ ihe ịrịba ama nke mgbanwe mgbanwe nke Office. Office 2013, nke etinyere na njikọ Metro, mezigharị Metro UI.
Office 2013, nke na-eji igwe ojii kọwapụta, nke na-ewu ewu kwa ụbọchị, na-eritekarị uru na sistemụ a. Ga - enwe ike ijikọ faịlụ gị na Windows Phone 8, kekọrịta ha site na igwe ojii na ịgbanwe faịlụ. Na mgbakwunye, Microsoft na-akụnye usoro SkyDrive nke ọma maka ndị ọrụ ya. Enwere ike iji Office 2013 na ngwaọrụ mkpịsị aka, na-atụle kọmputa mbadamba Microsoft na-abịanụ, Mkpa. Enweela ngwaọrụ emetụ maka Office 2013, nke mejupụtara onwe ya na imewe. Ndị ọrụ na-eji ngwaọrụ mmetụ aka ga-enwe ike ịchịkwa sọftụwia Office nụzọ kachasị mma.
Na nkenke, ị ga-ahụ ahụmịhe kachasị mma na Office 2013. Office sọftụwia, nke nwere ụdị dị mfe, dị mfe, na-agbanwe agbanwe ma baa uru, enwegoro nke ọma na Windows 8.
Budata Microsoft 365 Kama Office 2013
Office 2013 tinyere Okwu 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 na ngwa Outlook 2013. Microsoft na-akwado ndị na-eji mmemme Office 2013 ka ha gbanwee na Microsoft 365.
Ihe dị ọhụrụ na Okwu na Microsoft 365
Jirichaa gị ide: Tụgharịa gị oghere peeji nime mara mma-na-achọ akwụkwọ na-adịghị oge na-eme nchọpụta na Editor ngwaọrụ.
Soro onye ọ bụla rụkọrịta ọrụ, ebe ọ bụla: Kpọọ ndị ọrụ ndị ọzọ ka ha dezie ma kwuo okwu, jikwaa nnweta, ma soro usoro.
Debe Okwu gị na njem: lee ma dezie faịlụ gị na ọrụ, ụlọ ma ọ bụ na-agagharị na ngwa mkpanaka.
Na-emelite oge niile: Nweta atụmatụ ọhụrụ na mmelite nche naanị maka Okwu na Microsoft 365.
Kedu ihe dị ọhụrụ na Excel na Microsoft 365
Hụ data gị nke ọma: Hazie, were anya wee nweta nghọta site na data gị karịa ka ọ dị na mbụ site na iji atụmatụ ọhụrụ dị ike.
Na-emekọrịta ngwa ngwa: Site na 1TB nke nchekwa ojii Cloud, ị nwere ike ịkwado, kesaa, na ndị na-ede akwụkwọ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla.
Debe Excel soro gị na njem: nyochaa ma dezie faịlụ gị na ọrụ, ụlọ, na agagharị yana ngwa gam akporo, iOS na Windows.
Na-emelite oge niile: Nweta atụmatụ ọhụụ pụrụ iche na mmelite nche naanị maka Excel na Microsoft 365.
Kedu ihe Ọhụrụ na Outlook na Microsoft 365
Gbado anya na ihe dị mkpa: Igbe mbata elebara anya na-ekewa ozi ịntanetị gị kachasị mkpa ka ị nwee ike ilegide anya na isi ihe ndị ahụ.
Debe Outlook na gị na njem: soro ozi ịntanetị gị ma nyochaa ma hazie mgbakwunye site na ebe ọ bụla nwere ngwa mkpanaka dị ike.
Na-emelite oge niile: Nweta atụmatụ ọhụụ pụrụ iche na mmelite nche naanị maka Outlook na Microsoft 365.
Ihe Ọhụrụ na PowerPoint na Microsoft 365
Jiri obi ike chepụta ma gosipụta ya: Ngworu eji arụ ọrụ nke ọma mere ka ị mepụta ngagharị mmiri ma mee ka slide gị dị ole na ole.
Rụkọta ọrụ ọnụ na nkwekọ: Site na 1TB nke nchekwa igwe ojii OneDrive, ị nwere ike ịkwado, kesaa, ma dekọọ edemede gị na ndị ọzọ.
Jiri PowerPoint ebe ọ bụla ị na-aga: Nyochaa ma dezie faịlụ gị nọfịs, nụlọ ma ọ bụ ebe ọ bụla ọ na-eji ngwa mkpanaka.
Na-emelite oge niile: Nweta naanị, atụmatụ ọhụrụ dị naanị na PowerPoint na Microsoft 365.
Office 2013 Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.48 MB